120w Ọkụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka 120w Ọkụ)
120W ìhè 5000K ada ọka bulb ọkụ
120W ìhè 5000K ada ọka bulb ọkụ Bbier 120W dughaara ọka blọgụ 5000k , ikpo ọkụ dị elu maka ọkụ na ọkwọ ụgbọ ala. duru mbadamba E26 echekwa ihe karịrị pasent 80 nke ọkụ eletrik site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ọkụ nke Led Corn Bulb Canada bụ ihe karịrị 50,000 awa, ìhè akara ogo 360, ntụgharị ntụgharị dị elu. E39...
100W 120W 150W Led Ìhè Ìhè nke 5000K
Iju mmiri anyị nke Led 150w nwere ike ịmịpụta ruo 18000lm na-enwu nke ọma. Iju mmiri nke Led 100w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè nke Ligharị 120w ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi, ị nwere ike iwunye ya ihe ịchọrọ. Site na ntulee IP66, enwere ike iji ọkụ ide mmiri kpuchie elu...
Mpupu Igwe Mbara Igwe Ọkụ na Photocell 150w
Inye Ike: 50000pcs/month
Ebe nchekwa anyị na-ekpuchi ọkụ bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a Mpupu Mpupu Ike 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ìhè ahụ dị na Photocell nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche maka nhọrọ. Anyị nwere ike ime ime ụlọ anyị bụ slim design slim na-achọ, dị mfe iji...
120W Ejiri Mbara Igwe Mbara Igwe na Batrị
Ihe dị na 120 W Sunlight Light bụ 8500mm na 6-7 awa na-akwụ ụgwọ oge. Nke a 120w Sunlight Street Light Malaysia nrụnye dị elu bụ 9-10, na agba okpomọkụ bụ 5000K. Igwe ọkụ nke anyanwụ nke 120 na batrị nwere oghere ndị dị n'elu akụkụ a na-enwupụta ìhè anyanwụ n'oge ehihie, mgbe ahụ, ndị na-eji ọkụ na-eji ike a...
120W Na-emepụta Ndabe Mbara Igwe na Nchịkwa
Igwe Igwe Na-enwu gbaa nke 120w bụ 8500mm na 6-7 awa na-akwụ ụgwọ oge. Nke a 120w Sunlight Street Light Design echichi dị elu bụ 9-10, na agba okpomọkụ bụ 5000K. Ọdịdị nke 120 nke Sunlight maka Sale Philippines nwere oghere nke dị n'elu akụkụ a na-enwupụta ìhè anyanwụ n'ehihie, mgbe ahụ, ndị ọkụ na-eji ike a...
120W na-eburu ọkụ pizza nnukwu ọkụ ọkụ
Min. Nhazi: 1 Box
120W na-eburu ọkụ pizza nnukwu ọkụ ọkụ 1. Ngwá Ọrụ Ike Eji (aha pizza highbay ): MEANWELL 2. Ọrụ Okpomọkụ: -20 ℃ 40 ℃ 3. (na- ebute pizza ) Ejiri dịka: 400W MH / HPS / HID Light
GU24 E27 9W Ejiri Ọkụ Klaasị maka ire ere
Nkwakọ ngwaahịa: 250pcs / CTN
The 9w Led Corn Bulb Review bụ 110LM / W, Day White 5000K na nke a 9w Led Corn Bulb Menards bụ nkwụsị zuru okè maka mgbidi bọtịnụ 18W. A na-eji ihe ọkụkụ 9w Led nke Ahịa maka ire ere ma ọ bụ na- eji n'ụlọ, ahịa, ụlọ ọrụ, ezumike ụlọ. Igwe ihe omume a na- adabere na gburugburu ebe a na-eme ka oriọna ọka na- abụghị...
E27 6W Ọkụ Mkpụrụ Bulb Led 5000K
Ọkụ 6w anyị bụ Mkpụrụ Igwe Ọkụ Na-acha bụ 110LM / W, Day White 5000K na 6w Corn Cob Led Light bụ nkwụsị zuru okè maka 18W incandescent bọlbụ. Onu ogugu kpocha nke 6w na Cob Light Fitit enwere ike iji ya na ụlọ, ahịa, ụlọ ọrụ, họtel. Igwe ọkụ bọmbụ ọka a na-eji eme enyi na- eji bụ Mercury-free, ọ dịghị flickr na ọ...
80W Ọka Ọkụ Na-agba Ọkụ 10400LM
Nkwakọ ngwaahịa: 12pc / CTN
Ejiri ọka ahụ bụ ihe na-egbuke egbuke na 130lm / w elu watt to lumen output ratio. Ejiri Igwe Ọkụ a 80w na-edochi bọmbụ 250W ka ọ na-echekwa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. Na 80w ọka Cob Ìhè enweghị radieshon, ọ dịghị ọkụ ọkụ, Na-aga n'ihu ma na-agbanye, ọkụ ọkụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mma-enyi na anya. Nke a...
5000K 277VAC 150W Ọkụ Mpaghara Mpaghara
5000K 277VAC 150W Ọkụ Mpaghara Mpaghara 1. 15 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụkwa ike, na gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe dị elu 150W Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị. 3. 150W post ìhè mpaghara Elu ike na kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ. 4....
120W Rụọ ọrụ bọtịnụ ọkụ
120W Rụọ ọrụ bọtịnụ ọkụ <Ọdịdị Pụrụ iche Durable> : Nke a bụ 120W eduzi ihe eji eme ihe ntanye ngwa ngwa bu ihe di mfe ma di mfe ibughari na oru di iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye agbatị na nchebe iji kpochapụ ihe ize ndụ nke iko dị nro...
75W Ọkụ Eluigwe - 9750lm
Bbier 75W Pelu Ugwu Elu - 9750lm na -egbukepụ egbukepụ ọkụ na-arụ ọrụ 130lm / watt, na-anọchi 250W MH / HID / HPS. Nke a n'ahịrị uhie a - 9750lm nwere ezigbo ihe ngosi heatsink e mere maka oge 50000 nke ndụ. Nke a 75W Diana Uhie Elu kacha mma MEE 2-3 / 8 nke anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa ahụ dị mfe iji wụnye ọkụ ọkụ, ubi...
120W LED Nwa oge Ọrụ Light 5000K 15600Lm
120W LED Nwa oge Ọrụ Light 5000K 15600Lm <Ọdịdị Pụrụ iche Durable> : Nke a bụ 120W eduzi ọrụ ọkụ ọkụ ọrụ dị ngwa na mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye agbatị na nchebe iji kpochapụ ihe ize ndụ nke iko dị nro agbajiri....
120W Led Temporary Work Light 15600Lumen
120W Led Temporary Work Light 15600Lumen <Ọdịdị Pụrụ iche Durable> : Nke a bụ 120W eduzi ọrụ ọkụ ọkụ ọrụ dị ngwa na mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye agbatị na nchebe iji kpochapụ ihe ize ndụ nke iko dị nro agbajiri....
30D Ogige Uhie Ọkụ 3900
Bbier Garden Light 3900 Lumens nwere nnukwu na-egbukepụ egbukepụ ọkụ dị elu 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Osisi Uhie a 30w na-acha ọkụ ọkụ na-eme ka a mara mma ọhụụ maka 50000 awa nke ndụ. Nke a ọkụ Ìhè 3900 Lumens dabara MEE 2-3 / 8 anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa pole mfe iji wụnye ọkụ ụgbọala, ọkụ na ụzọ. Anyị E...
120W Pizza highbay 300 Watts MH Replacement
120W Pizza highbay 300 Watts MH Replacement LED Pizza Retrofit ìhè , BBier High-Tech Lighting bụ soplaya nke elu mma n'èzí / ime ụlọ na ada n'ogige ọkụ usoro na ngwọta maka gị oru ngo. eduzi Pizza Retrofit E39 bụ ihe ngwọta dị mfe maka ime ụlọ na n'èzí ebe ọkụ ọkụ dị na ngwa ahia na azụmahịa. Ụlọ nkwakọba...
E27 15W Ọkụ Ndị Na-ahụ Maka Ọkụ Na-acha
Nkwakọ ngwaahịa: 100pcs / CTN
Min. Nhazi: 3 Piece/Pieces
15W Corn Cob Led Lamps jiri ejiji ọhụrụ-SMD 2835 na-anọchite anya 45W Metal Halide / HPS / HID, obere oriọna na-enye ìhè nnukwu mpaghara. Nke a na- acha ọkụ ọkụ Led 15W bụ 120Lm kwa Watt (Mgbagwoju ọkụ igwe nkịtị bụ 80Lm per watt). Anyị 15w ọka cob Dugara Light Bulbs nwere p rofessional technology maka ọkụ, obere...
120W n'èzí n'èzí n'èzí ìhè Lightodod
Nkwakọ ngwaahịa: 12pcs / CTN
Inye Ike: 60000/month
ONYE ANYỊ NA-EME: Ihu igwe na-eguzogide ọgwụ na Led Work Light Tripod enwere ike iji ya ọbụna ebe kachasị mma. OKWỤKWỌ NDỊ AHỤRỤ ỤBỌDỤ: na-eru ihe karịrị ụkwụ atọ, ụyọkọ tripod na-eme ka ị hụ na ị nwere nsụgharị Tripod Ọrụ ọkụ ebe ị chọrọ ya OKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ NDỊ AHỤ: Igodo isi na-agbanwe agbanwe na-enye gị ohere...
Ihe ngosi 120W LED High Bay Lightup Retrofit
Ebube Led High Bay DLC High Bay Lighting, 14400lumen, 100-277VAC / 50-60Hz, 200-480VAC dịnụ, E39 Mogul Base, Led High Bay Retrofit Kits bụ isi iji dochie 400w Watt HPS LPS na isi nkwụsị. 1. Ụdị ogo 120 degrees 2. Ezube ọkụ dị na High Bay bụ isi iji dochie HPS LPS na isi ihe na-arụ ọrụ 3. Iji aluminum ncha okpomọkụ...
120W Led Dimmable Retrofit Kit Shoebox Light Retrofit
Nkwakọ ngwaahịa: 3pcs / CTN
Inye Ike: 50000/month
Ihe ngwangwa anyị dị 120 Watt Led Dimmable Retrofit Kit ruru 15600 Lumens na nke 120W Led Retrofit Kit nwere ike dochie 300w-400 watt MH / HPS / HID / omenala ọkụ ọkụ. Ihe dị ka 120 Watt Led Retrofit Kit nwere agba agba 5000K na-eme ka ìhè doo anya, ọ dịghị acha anụnụ anụnụ na 3% na-enwu gbaa karịa 4000K. The l ed...
AC277V 120W mere ka ìhè ọkụ E40 gbanye
AC277V 120W mere ka ìhè ọkụ E40 gbanye Bbier AC277V 120W kpochapụrụ ọkụ ọkụ E40 okpu , akwa ọkụ okpomọkụ maka ọkụ na ọkwọ ụgbọala. Ebicha ọka ọka E39 na -enye ihe karịrị pasent 80 nke ọkụ eletrik site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ ọkụ nke Led Bulb highbay bụ ihe karịrị 50,000 awa, ìhè ogo 360, ntụgharị...
120W edu ọka bulb 5000k
120W edu ọka ìhè bọlbụ 5000K Bbier 120W edu ọka ìhè bọlbụ 5000k , top quality heat sink for LEDs and driver. Nke a mere bọlbụ E26 echekwa ihe karịrị pasent 80 nke ọkụ eletrik site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ ọkụ nke Led Corn Bulb USA bụ ihe karịrị 50,000 awa, ìhè akara ogo 360, ntụgharị ntụgharị dị elu. E39...
100W Gburugburu n'Ọdọ Mmiri Na-enwu Ọkụ Dị Elu
Nnukwu Mmiri Elu anyị bụ Led Round bụ ngwọta zuru oke maka mkpa ọkụkụ azụmahịa na ụlọ ahịa, ụlọ nkwakọba akụ, ụlọ ahịa, oghere na-emepụta na nnukwu ụlọ ahịa ịzụ ahịa. Site na ikikere ike na-ekpuchi ya, a na-emepụta Led High Bay Lighting Fixtures maka na-adịte aka na azụmahịa / ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ezubere 100w Round...
120w Ọkụ 120W Ọkụ 100w Ọkụ ọka Igwe ọkụ Ejiri Ọkụ 100w Olulu Uhie Ọkụ 100W Ọhịa Ọkụ Ngwá Ngwá Ọkụ